UMarissa Mayer uchaza ukuthi kungani bengasekho abahleli besifazane | Kusuka kuLinux
UMarissa Mayer enhlolokhono huffingtonpost yochungechunge AbesifazaneInTech uchaza umbono wakhe ngodaba lokuhlanganiswa kwabesifazane kwikhompyutha futhi ngokujwayelekile emhlabeni we-geek. UMayer waziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe kwaGoogle selokhu athola iziqu eStanford, imvamisa eba ngumuntu obonakala enkampanini. Njengamanje usebenza njengePhini likaMongameli we-Localization and Local Services. Kule ngxoxo, phakathi kokunye, ukhuluma ngokukhathazeka kwakhe ngenani labesifazane abasebenza emhlabeni wezobuchwepheshe.
UMayer uthi inkinga yesibalo esiphansi sabahleli besifazane nabasomabhizinisi be-Intanethi iyinkinga yokuthi sibubheka kanjani ubuchwepheshe. Yebo, njengoba sikhula, amantombazane anikezwa inkolelo evaliwe yokuthi kusho ukuthini ukuba yi-geek (umuntu ngokwesiko yedwa ochitha amahora ukuthayipha phambi kwesikrini). Ukuheha abesifazane abaningi kubuchwepheshe kungasho ukwephula lo mbono futhi sikhombise amantombazane ukuthi akudingeki uthande imidlalo yevidiyo ukuze ube yintombazane eyi-geek. UMayer uqobo wayengumdansi we-ballet onentandokazi yama-pastel nemfashini ka-Oscar de la Renta.
Into ebaluleke kakhulu esingayenza ukukhulisa isibalo sabesifazane kwezobuchwepheshe ukukhombisa ukuhlukahluka kubantu abayizibonelo. Isimo esiqinile salokho okuba wuhlelo (usosayensi wamakhompiyutha) sithinta kakhulu ukuqonda kwabantu nokukwazi ukubona indima, sidinga abantu ukuthi bakwazi ukuthi “Yebo le yinto engifuna ukuba yingxenye yayo".
UMayer unethemba lokuthi amasayithi e-Facebook, Twitter ne-Google, kanye nezingcingo zesizukulwane esilandelayo kuzoba yisikhuthazo ekushintsheni isilinganiso ezindimeni zobuchwepheshe ngokucacisa ukusebenza okusebenzayo kwesayensi yamakhompyutha. Yize abesifazane nabesilisa kule mboni bebhekene nezinselelo ezifanayo, umehluko kwabanye besifazane ukuthi kubalulekile ukuthi baqonde ukuthi imisebenzi yabo izokuthinta kanjani impilo yabantu yansuku zonke.
Abesifazane bafuna ukubona ukusetshenziswa kwalokhu abakwenzayo ezimpilweni zabantu. Abesifazane abaningi ababoni ukuthi uhlelo (ikhompyutha yesayensi) lufinyelela kanjani kubantu.
Njengoba sijwayela ubuchwepheshe, abesifazane bazodonseleka kakhulu kwisayensi yamakhompyutha. Esinye isizathu esenza uMayer acabange lokhu ukuthi kule minyaka abesifazane bazama okuningi ngobuchwepheshe usuku nosuku. Lapho usebenzisa lezo zinto nsuku zonke, uba nelukuluku lokwazi ukuthi zenziwa kanjani.
Kuze kube manje okuvela kuMayer.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » UMarissa Mayer uchaza ukuthi kungani bengasekho abahleli besifazane
Amazwana ayi-93, shiya okwakho
Kufanele kube okuthokozisayo ukubona uhlelo lwabesifazane - okungenani ngingaluthanda 🙂
UMweh, kulapho azi khona akwenzayo futhi uthi ngike ngabona izithandani zaze zaba zimbi ukwedlula indoda ethandana nolimi noma ubuchwepheshe obuthile.
Qaphela, ngihlangane nabathuthukisi ababili abangishiye ngingawuvali umlomo, kepha iningi lasenyuvesi (abesifazane) emkhakheni wesayensi yamakhompyutha, empeleni, abanandaba nomsebenzi ...
Emkhakheni wobunjiniyela bamakhompiyutha ngiphinde ngabona amanye amantombazane ahlakaniphe kakhulu futhi / noma afundayo ngoba enza kahle kakhulu ezivivinyweni, kepha angiboni ukuthi azizwa ethanda ubuchwepheshe, okungenani njengoba ngangizizwa ngokwesibonelo muva nje, ngenkathi ukuthi ukufakwa kwe-Debian 6.0 kuzosebenza kahle ngamadiski amabili we-SATA ekucushweni kwehadiwe RAID1, ngokungeziwe ngamahlukanisi we-LVM.
Vele, lokhu kubonga kungokwesimo, ngoba asikwazi ukwazi ukuthi omunye umuntu uzizwa kanjani, kepha njengoba abesifazane bevame ukuxhumana, umuntu angalindela ukuthi nabo bakhulume ngobuchwepheshe uma bekubathakazelisa ngempela, futhi lokhu akuvamile ukwenzeka.
Kuze kube manje sengibonile amantombazane athokozela ukuthuthukiswa kwewebhu, kepha lokhu nokuba ngumthandi wobuchwepheshe njenganoma ngubani wethu, kuyinto ehluke kakhulu 🙁
Awunabo abangane be-geek ???
Kodwa yini le ???
nabesifazane be-debianitas bazohlala kuphi ????
I-KZKG ^ UGaara imvamisa akabi nabangane isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezi-2 ngeshwa ...
wenzani igaara nabesifazane ???
Noma akunjalo ??? LOL !!!
LOL !!!! Uma uqhubeka nokuholwa yimibhedo ethi Isibindi, ngikubona kabi LOL !!!
ungathukutheli, siyadlala nge-XDDDD
Okwezinkinga sekuvele kukhona i-anime !!!
Nah uma ngingathukutheli ngezinto ezinjengalezo hahahaha 😀
Ukuthi ubudlelwano bami buhlale izinyanga ezimbili (futhi 2 kuphela) akusho lutho ... uff .. kubi kangakanani ukungabi nenye into ongayigxeka, akunjalo? uhlala uphikelela engqikithini efanayo futhi awuyivuseleli i-LOL !!!
Vele angikwazi ukusho lutho ngami ngoba, njengoba wonke umuntu azi, angizange ngibe nobudlelwano futhi angihleli ukuba nabo, hleze ngiphonse okuthile ekhanda lentombi yami ngimshiye eyisiwula.
Ngaphandle kokuba ngumdidiyeli wohlelo, unengxenye yamasheya omkhiqizo owaziwayo wesoseji, wenza igolide.
Kokunye ngizoyeka ukuthi kungahle kufike umuntu engimaziyo azibize ngokuthi ngingu-macho no-misogynist.
Ngokwesiko, ubuchwepheshe buhlobene kakhulu nabesilisa (izinhlobo zethu zithanda izinkolelo-ze futhi ziyabajabulisa), kepha ziyimihlangano yezenhlalo ngaleso sikhathi leso sizoshintsha - noma kunjalo ngiyethemba-. Nginabangani abadlala noma abathanda ikhompyutha njengami; izikhathi ziyashintsha.
Yebo, nginomngani wami owafunda i-computer science ngoba edolobheni lakhe kwakuyiyona kuphela into eyayingafundwa eyunivesithi.
Futhi ake sihambe uthathe umjaho ngenothi angafisa okungaphezu koyedwa.
Ekugcineni angakaze asebenzise okuningi, akathandi noma yini ehambisana ne-linux ngoba emjahweni bekufanele alwe ne-slackware nenkampani futhi akathandanga ukuyothayipha ukuze kusebenze i-hard drive yangaphandle ne-blah blah blah.
Inkinga okufanele uyenze ekukhuthazayo, manje ukuphela kwento oyenzayo uhlelo olunosawoti emafasiteleni.
Yilapho-ke enesikhathi samahhala, kepha siyazi ukuthi umsebenzi awumgqugquzeli ukuthi asebenze njengekhompyutha.
Kuyadabukisa kodwa kungokoqobo
Ukufunda ongakuthandi kuyinto embi kakhulu umuntu angayenza.
Lokhu ngikusho ngokuhlangenwe nakho, ukuthi ngifunda ibanga eliphakathi engilizondayo ngawo wonke umphefumulo wami.
Kubi kakhulu ukuthi omjwayele ube nenhlanhla yokuthi angafundela isayensi yekhompyutha kuphela.
Uma efuna ukufundela ukwakhiwa kwezakhiwo kodwa ebheka abazali bakhe bebengeke bamvumele azikhulule yena, amakhilomitha ayi-150 akhona…
Manje uhlala kulelo dolobha futhi akasafuni ukufunda, unenkumbulo ebabayo ngezifundo zakhe (owesifazane ompofu wahlukumezeka),
Ngaphezu kokungagcini inkumbulo enhle yabazali
Lapho usemncane, abazali bakho noma umphathi wakho osemthethweni benza izinqumo ezibaluleke kakhulu maqondana nempilo yakho. Lapho uhlanganisa iminyaka engu-16, ngicabanga ukuthi ngiyakhumbula, ungazikhulula, okusho ukuthatha izintambo zomthetho zobukhona bakho nokukwazi ukuhlala wedwa ngaphandle kokuya ngentando yomqaphi osemthethweni. Vele, nalokhu kuphethe nezingozi, kufanele ukhombise ukuthi uyakwazi ukuzimela ngokwezezimali nezinto.
Kepha kulo mongo, ngicabanga ukuthi umane ubhekise kubazali bakhe ukuthi bangamvumeli ahlale yedwa kwelinye idolobha.
Lapha kusuka ku-16 ukhululekile ukufunda noma cha, kepha akukho okunye.
Ukuzikhulula kubazali… ukuphuma endlini, ukuzimela…. woza, okudingayo i-LOL !!
enginalo ukuxhumana naye….
Damn awukaphazamisi lutho, ukhuluma ngokujwayelekile, njengabantu, hhayi njengezilwane.
Uma kukhona induduzo, isibindi
Ngifunde ibanga eliphakathi engangilithanda, futhi okuningi kukhathazeka ngokweqile ngezifundo nakho konke, ngakho-ke ngakhumbula lokho osolwazi abakunikeza kamuva (noma manje !!!), kepha abakaze bangivumele ngisebenze izinyanga ezingaphezu kwezingu-6 zilandelana ...
Kepha lapho angiboni ukuthi iphutha lilele kwimodyuli uqobo, kepha izinkampani noma inkontileka.
Angazi nokuthi yini engiyidingayo ngoba ngaso sonke isikhathi kuzoba kuhle kakhulu.
Isibindi ufunda i-rascal
Ukunakekelwa Okusizayo Kwabahlengikazi Abaphakathi, okungenye yezinto ezinhle kakhulu ongayithola ku-Medium Degree FP kanye ne-Socio-health Care, okukubi kakhulu.
Isibindi majete ... uzoba ngumhlengikazi noma udokotela? ... Ngingakucabanga uma kufika isiguli esigulayo, uthi: «ubekezele, kungcono ungalulami ukuthi lo mhlaba awukufanele ... umhlaba uyinto shit, ufe futhi uzisindise ukungajabuli ..."... LOL !!
Angithandi lutho oluhlobene nempilo. Ngakho-ke angisoze ngasebenza kusuka kulokho. Bengifuna ukuyeka ukufunda lokho kodwa ngiyabonga uyazi ukuthi ubani omunye umuntu akamvumelanga.
Futhi sekuvele kuhlekisa kakhulu ngemishwana efana nale: kungcono ungalulami ukuthi lo mhlaba awukufanele ... umhlaba ungcolile, ufe futhi uzisindise ngokunengeka.
Uma lezi zinhlobo zemicabango zinesizathu sangempela, azibonakali njengezinto zokuhlekisa, hhayi lapho zizenzela ukuheha ukunakwa.
Engikucabangile ukuthi uma ngingasithandi isiguli, ngizokwenza konke okungalungile ukusilimaza, ukusisikaza, nginentshisekelo nge-pasta kuphela, isiguli siyisusa kimi.
Ngizokwenza konke okungalungile ukumzwisa ubuhlungu, ukumfenda, nginentshisekelo nge-pasta kuphela, isiguli siyangihluba.
Ngikhumbuze ukuthi angikaze ngikuvumele ungihlanganyele 😀
Angishongo ukuthi ngiyakuthanda, ngaphandle kwempilo yaseCuba ingcono kuneyethu
Ngeke ngikhulume ngakho lapha 😉… uma ufuna ukwazi okuthile, uyazi ukuthi ungangithinta kanjani futhi ngizocacisa ukungabaza okuthile 🙂
Kupholile kanjani ukuluma noma ukukhala uma uthi okuthile eCuba kungcono huh?
Bangitshele ukuthi imfundo e-Argentina naseMexico ihamba phambili eNingizimu Melika, eMelika Ephakathi angisazi ……….
Le akuyona indawo yebhulogi / yenqubomgomo 😉
Ezempilo nezepolitiki akufani.
Futhi angikushongo ukungena esihlokweni noma yini.
Kepha woza, uma ungafuni ukuthi ngihlanze uhlelo lwakho lwe-serum, angilususi futhi ubulawa isifo sohlangothi.
kubi kakhulu ukuthi umshayeli we-ambulensi.
Nami ngenze eyempilo !!!
Lowo ongahlanyi ngabe ukwenzile !!!
Ninesibindi nonke !!!
Yebo, akukho okumele ukwesabe ngaleli banga, ngoba ubuhlengikazi buncane noma abunakwenza lutho, kunalokho benza umsebenzi ongcolile.
Ama-probes kanye ne-punctures kwenziwa ngumhlengikazi, ungalokothi umsizi.
ianpock's HAHA nah awukenzi lutho… ungacabangi kanjalo, thina sodwa sanele ukuyihlanganisa ne-LOL enkulu !!!
Ngiyacabanga Isibindi Usafunda i-ESO angithi? (yilokho okubizwa ngakho angithi?)
Ngashiya i-ESO eminyakeni emi-2 edlule, angizange ngiyiqede.
Funda i-FP Medium Grade, i-FP1 yabadala
Ukufunda ongakufuni nakho kwenzeke kimi, futhi kuhamba kanjena. Kwesinye isikhathi abazali baxabanisa impilo yakho ngendlela embi ...
Endabeni yami kube ngedwa, okubi kakhulu.
Kepha okungamele bakwenze abazali ukuthi baye lapho bengabizwanga khona, ngicabanga ukuthi bafuna sifunde bese siyabasekela, uma kungenjalo angikutholi okunengqondo.
Okubi kakhulu ukusebenza kulokho ongakuthandi futhi kuyenziwa, ngaphandle kokuhlukumezeka noma ukubanjwa …… njengoba
Ngazi okuncane ngalokho
Akukubi kakhulu, kunemali ebandakanyekayo, lapho ungafundi.
Futhi ngesikhathi somsebenzi ubusudlule esigabeni sokufunda futhi uma ukhetha kahle akudingeki ukuthi usebenzele okuthile ongakuthandi.
izinto ezinhle zibukeka kanjani ngaphandle ...
Imali yinto ebaluleke kakhulu empilweni.
Isibindi uvelaphi ????
Yebo, umngani wempisi uqinisile kwesinye isikhathi kufanele usebenzele lokho ongakufuni, nokuningi ngezikhathi zenhlekelele. Uma kungenjalo ungitshele, noma uyaxhashazwa noma uyisinxibi ngokwakho !!
Mina ngivela eSpain.
Kepha lapha wamukelekile, lapha banikeza umsebenzi kuwo wonke ama-prawn, kubantu abajwayelekile abasinika bona. Njengoba si-ode ama-3 nama-prawn 2 ...
Isibindi, ungakhulumi ukuthi nami ngivela eSpain, kunzima ukuthola ama-gigs, kodwa kutholakala ...
Hhayi-ke, masonto onke bangibizela emsebenzini futhi angikwazi ngoba sengivele ngihlanganisa amahora angama-40 ngesonto ...
Umuntu naye ufana nakho konke, udaba lwenhlanhla, kepha abanye bethu banesilinganiso esibi se-200%.
Kusadingeka ngifunde iziqu eziphakeme, ngoba inyuvesi ibonakala kimi ukuthi ngizoyishiya kuma-nerds amancane.
Ake ungitshele ukuthi ngiyaphi, palla head
Ngisho okufanayo nokudla, lokhu kunikezwa kwewa kusifunda sini? I-LOL. Ngicabanga ukuthi uma unolwazi, kuhlale kulula ukuthola umsebenzi. Ngicabanga ukuya eNgilandi noma eTibet, angikanqumi okwamanje.
Angifuni ukwenza izihloko ezingekho emakhasini noma yini kepha ngiyazi ukuthi umsebenzi wesikhashana uhamba kahle kakhulu, njengoba ngishilo ukuthi kunzima kangakanani ukusebenza enkampanini ngisho namahora ama-2. Uma sebekwazi, unenkundla evulekile!
Ngivela esifundeni saseCatalunya futhi ngingakusiza eBarcelona kodwa bengivele ngishilo ukuthi ngeke kube yimisebenzi emihle kepha okungaba ukuthi uma unenhlanhla yimali ephephile.
Okungenani yingakho kunabaningi abangakukhokhi ngisho nokukukhokhela (ngenhlanhla akukaze kwenzeke kimi)
Uma ufuna idatha nakho konke lokho, dlulisa i-imeyili.
Uma uvumelana nalokho, ngiyakwazi ukunakekela ukukudlulisela amakheli e-imeyili
Ngenkinga yami engenankinga, uma ngikwazi ukusiza othile futhi kusezandleni zami, kungani ungakwenzi ??????
Uma i-keopety iyavuma, ngizokunikeza ikheli lalowo nalowo futhi ngikwazi ukukhuluma ngokukhululeka.
Angiboni lutho olungalungile nge-geek noma i-geek stereotype, empeleni kulapho ngithole khona abantu abaphilile nabanomusa, kakhulu kunabantu * abajwayelekile * (ukujwayela kuyinto nje elandela inkambiso, akusho ukuthi kungaba kuhle noma kubi).
ukujwayeleka kuyinto nje elandela okujwayelekile, akusho ukuthi kuhle noma kubi
O_O ... damn, ucezu lweqiniso okushilo ... kuphelele!
Keopety, uma ungowaseSpain, ngingakusiza
ibanga eliphakathi, isibindi !!!!
Ukuthi ukubeka eminyakeni emibili kube yinto embi kakhulu!
Imayini iseyodwa, yingakho i-FOL neRET zingangivumeli ukuthola amanye amabanga aphakathi ¬¬
Uma ngivela eSpain, luhlobo luni lomsebenzi?
Indlela abasebenza ngayo lapha yinhlekelele, kimi abantu kanye negundane noma i-ret kuyisifundo esisodwa kuphela lowo mdlalo
Ngabe uke wabona umqulu othuthuke kakhulu ????
Isibindi somsizi we-infermeria …… ..
Nginguchwepheshe wezokhemisi (ibanga eliphakathi naphezulu) lol
Nezifundo ezingasile ozikhohlwayo.
KwaRet izinto eziningi zinengqondo, yize mina ebengifundela ezokuphatha kungenzeka ukuthi ngenxa yalesi sizathu leyo ndaba ayingibizi.
Kodwa Fol? Yeka i-pestiño yezihloko, imithetho, izinhlobo zenkontileka namaholo, uma kunezinhlelo zekhompyutha ezigcwalisa amaholo akho. Futhi imithetho ngokuzilanda kwi-intanethi yanele.
Kulabo engibanikezayo, kuphela i-TB, iNhlanzeko, i-TOE kanye ne-Psychology ebaluleke ngempela, ngoba iDocumentation cishe yokuthi sinikeza ama-automation amahhovisi amaningi kunanoma yini enye, kunenqwaba ye-carcamal engazi noma egcine umbhalo we-Word.
I-KzKg ^ Gaara (bekungekho i-nick eyinkimbinkimbi kakhulu ????)
Kungcono kakhulu engikubonile, noma bengingakwazi ukukukhetha ngoba ngezigaba zesiNgisi akunakwenzeka!
Imvamisa i-gig yangempelasonto uma ikhona!
Ngisebenzele umististist isikhashana futhi okuwukuphela kwento obekufanele ngiyenze ukutshela iqembu ukuthi lilindelwe ... xDDDDDDDDD
Ngiye endaweni yokucima ukoma ngiyophuza ikhofi bangibala njengamahora okusebenza 🙂
Iya kuKhisimusi, angizange ngikhokhise imali eningi kodwa engangikujabulela 🙂
HAHA yebo bekukhona, okwami ​​akunzima kangako hahaha.
Uff… ake sibone… Ngiyasazi isiNgisi, ngiyazi isayensi yamakhompiyutha, ukuphathwa kwenethiwekhi, ukuthuthukiswa kwesayithi… mmm… Ngiyayifuna leyo misebenzi oyisho nge-LOL !!
yini LOL !!!
Ngaphandle kwalokho, usebenzisa i-arch (ngasendleleni eBarcelona angazi cishe noma ngubani oyisebenzisayo).
Okwama-debianitas uma behla ngomgwaqo nehembe
imisebenzi ephezulu ihlukile.
Uma wazi ngamakhompyutha nama-smartphone, ungabona okuthile okuhlobene nokusebenzisa ikhompyutha ngamahora angama-40 ngenkontileka yenyanga engu-6 kuya onyakeni owodwa
Ukushaja imali engaphezu kwenkulungwane !!!
Lokho kungama-30% kimi !!! 🙂
Ngaleyo mali ngisho ngingathanda ukuya lapho HAHAHAHA
KuMontera street, uma ngikwazi ...
Njengoba iLinux manje isiyinkampani yabaqashi i-LOL !!!! HAHAHA !!! 😀 😀
Hhayi-ke, ngeke kulimaze, ngoba imisebenzi yami izokuba mibi kakhulu ngezimpi engizoba nazo nabaphathi.
nangu umphathi wemisebenzi yimi !!!
Uma ngithi ulwazi lwekhompyutha, ngiqonde ukuthi wazi okuthile nge-cpu ne-hardware. Futhi okunye okuthambile kodwa kuza uma ufake i-arch, phonsa phambili ukuthi lo mhlaba ungowabantu abanobuso obuningi ukwedlula emuva
Ngisazi ngehardware ... ngizohlanganisa i-PC evulekile ibe yizicucu ngaphandle kokuphuthelwa umzuzwana
Uthe ngolunye usuku wesaba ukuvula ilaptop yakho.
Futhi ungenza umhlahlandlela wokuthi uwahlanganisa kanjani amakhompyutha.
Angikuthandi ukuvula ilaptop yami, ngoba uma ngesizathu se-X noma Y ngenza okuthile okungalungile ... ngiyayisipha, ngiphelelwe noma iyiphi, futhi lapho ngiba yi-emo 🙁
Angiqondanga umhlahlandlela ...
Isifundo sesithombe sendlela yokufaka i-CPU
Ngalokho-ke bengizodinga ikhompyutha ukuze ngiqaqe futhi ngenze okokufundisa, nasekhaya nginayo eyodwa kuphela futhi ikhehla lami ... angikwazi ngisho nokuhlekisa ngalo LOL !!
Gaara, ngakhele ikhompyutha enamakholi ayi-16 futhi ngayinye ye-1tera bese uyithumela kimi, ngizokuthumelela imali !!!! :)
Kulungile ngizokwenza ... ngokushesha nje lapho ama-CPUs we-1TB esheshayo ekhona i-LOL !!!
Awu, nginike ubhiya waseCuba !!!
Ubhiya uhambisana ne-brunette enhle noma i-mulatto ... ngakho-ke uma ufuna ubhiya, kuzofanele udele futhi uthathe umlingani wakho ... LOL !!!
Uzobona ukuthi manje kuza i- Isibindi ukulwa hahahaha
Yebo, uma ingena emgodini wobhiya we-mulatto +, ngeke ngithi cha, yize ukuphawula kwami ​​kungaphumanga ... LOL
Yebo kuhle kakhulu, kepha anginazo iziqu zesayensi yekhompyutha, noma okunye okunjalo
Qhubeka !!!… kubukeka sengathi akekho umuntu onesibindi sokusho ukuthi izintshisekelo zabesilisa nabesifazane azifani.
Imvelo, ngokuhlakanipha okukhulu, isenze sahluka futhi yize abanye bengazama ukusidida, kuzoqhubeka kube njalo.
Kukhona amasosha abesifazane, kodwa ukubulala kubonakala kuseyinto yomuntu wesilisa. Nobuchwepheshe, futhi.
Akusona isipiliyoni sami, ngifunda esikoleni sobunjiniyela (chemistry, akukho lutho olwenziwa ngohlelo) futhi imisebenzi enabesifazane abaningi ingamakhemikhali ezimboni kanye nobunjiniyela bezinhlelo (ngicabanga ukuthi kuyafana nekhompyutha yesayensi noma okungenani okufanayo). Lapho uma kungekho abesifazane nhlobo abase-elekthronikhi nakwimishini, kunama-salon aphelele ngaphandle kwentombazane.
Mina ezweni lami, eduze ne-SLP, MX.
Ngikuphawulile futhi ukuthi ukungabi nentshisekelo kwabesifazane ngenkathi ngisebenza emkhakheni wesayensi yamakhompyutha, yize kumele kushiwo ukuthi kwezobuchwepheshe badweba ubuso bami. Akekho owabashaya ezivivinyweni.
Mhlawumbe engxenyeni ebonakalayo kulapho ibahluleka khona, kepha ngiyawazi amacala lapho kunomsebenzi omningi onqotshiwe.
Ngifunda ubunjiniyela besistimu eyunivesithi yami nakuwo wonke umsebenzi wami ngibe nozakwethu abambalwa, okukhombisa inani eliphansi labesifazane abafunda amakhompyutha, ngoba kubo bonke abesilisa abangama-2 emsebenzini wami kunabesifazane ababili noma abathathu kuphela.
Emsebenzini wesayensi yamakhompiyutha kwisemester yami singabesifazane abayi-2 kuphela, futhi qagela ukuthi ngubani owazi okwengeziwe, bobabili hehe, ngakho-ke ungagcini futhi ngizibona ngingu-geek umama ecasukile ngoba ngithanda okwakamuva kwezobuchwepheshe kunezingubo noma izicathulo
Well 1 HURRA yakho nomngane wakho, ngifisa sengathi ngabe kukhona abanjengawe emhlabeni ... ngaphandle kokungabaza kungaba indawo engcono it
Uyemukelwa kubhulogi, kuyintokozo ukuba nawe lapha.
Yebo, impela kukhona, uma kungenjalo, ngubani ozogibela?
Kungaba kuhle ukubona i-informatics, uhlelo ^ - ^
Ngiyafunda, futhi ngihlela ukuba wuhlelo. Sanibonani, okuthunyelwe okuhle 🙂